Inona ny aretina Shaker amin'ny alika? | Tontolo alika
Efa nijery ny alikanao mihozongozona tsy misy antony ve ianao? Raha izany dia mety hahaliana anao ny zavatra holazaiko anao izao. Iray amin'ireo aretina mety hijalianao ny shaker syndrome, izay fantatra koa amin'ny aretin'ny alika mihozongozona na cerebellitis idiopathic.
Raha te hahalala ny antony isehoany, inona ireo soritr'aretina ary, ny tena zava-dehibe, ny fitsaboana azy dia manasa anao hanohy hamaky aho.
1 Inona no atao hoe Syndrome?
2 Inona avy ireo soritr'aretina sy ny fitiliany?
3 Ahoana no itsaboana azy?
Inona no atao hoe Syndrome?
Aretina izay dia misy mamaivay ny cerebellum, izay ampahany amin'ny rafi-pitabatabana tompon'andraikitra amin'ny fandrindrana ny fihetsiketsehana sy ny fihenan'ny volontena hozatra.
Na dia tsy azo atao aza ny mahalala marina ny antony hisehoany dia fantatra fa raha mijaly amin'ny rafi-pitabatabana afovoany sy / na raha manana volom-bolo fotsy io biby io dia mety hisy fijaliana bebe kokoa amin'izany.
Inona avy ireo soritr'aretina sy ny fitiliany?
Iray ihany ny famantarana iray: horohoron-tany mihetsiketsika izay tsy mijanona haingana. Satria iray ihany, mba hanaovana diagnostika dia tsy maintsy manao fitsirihana urin, rà ary fandrefesana amin'ny haavon'ny electrolyte ny mpitsabo biby ary koa maka santionany amin'ny tsiranoka cerebrospinal. Hanontany antsika ihany koa izy hoe oviana izy io no nanomboka nihovotrovotra toy izao sy ny fomba fivoarany.
Raha vantany vao afaka nanao diagnostika ilay matihanina azontsika atao koa ny mampiditra hopitaly ny alika hampiorina azy. Ho fanampin'izany, hanomboka hitsabo anao amin'ny kortisone izy, izay fanoherana ny inflammatoire izay hampihena ny fivontosan'ny sela. Araka izany, azo atao ny mihatsara ao anaty herinandro na roa, saingy mety hiharatsy ihany koa, ka izany no antony tokony hanarahanao hatrany ny torohevitr'ilay matihanina.
Misy fomba azo ialana izany? Tsy 100%. Ny sakafo tsara (tsy misy serealy) sy ny fikarakarana fototra (dia an-tongotra, lalao, fitiavana, fahadiovana) dia tena zava-dehibe amin'ny biby mba hisitraka fahasalamana tsara sy kalitaom-piainana tsaratsara kokoa, saingy indrisy tsy ampy hampihenana ny mety hijaly an'ny Shaker aretina
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » aretina » Inona ny aretina Shaker amin'ny alika?
Taranaka tsy fantatra: mpiandry Kaokaziana
Ahoana ny fomba hampitsaharana ady amin'ny alika